Maanta, shirkadeenu waxay xaflad fudud u qabatay wejigii saddexaad ee warshadeena. Saddex bilood gudahood, waxaan ku arki karnaa geedka dhammaystiran.
Iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda qiyaasta nitrogen-ka dareere ee aan aseptic ahayn, waxaan leenahay xal xirfad leh oo ah nidaamka qaadashada aseptic. Bishii Maarso ee sannadkan, shirkaddayada (Willman Makiinado) ayaa dhammaysay rakibidda iyo hawlgelinta nidaamka qiyaasta dareeraha dareeraha ee aseptic ee mid ka mid ah kaydkayaga ...
Qiyaasta Nitrogen-ka WM-YD-300 ee nidaamka qiyaasta nitrogen dareere ah ayaa soo dhex gelisa biirka farsamada ee la baakadeeyay iyo qaxwaha diyaarinta qabow. Tani waxay si wax ku ool ah uga saareysaa ku dhawaad ​​dhammaan oksijiinta dhalooyinka caagga ah ama daasadaha aluminiumka si loo kordhiyo nolosha shelf ...
Miro guduud ah oo qasacadaysan waa cunto qasacadaysan oo laga sameeyay fersken huruud ah oo cusub. Waxay hodan ku tahay fitamiin C, fiber iyo carotene oo uu u baahan yahay jirka bini'aadamka. Waxay diyaar u tahay inay cunto cunto. Xilliga xagaaga kulul, si fiican ayuu u dhadhamiyaa qaboojiyaha kadib. Waa runtaa ...